Miyey Kooxda Real Madrid Suuqa bisha Janaayo iibinaysaa Isco? – Gool FM
(Madrid) 20 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la xaqiijiyey haddii ay iibinayso iyo haddii kale ciyaaryahankeeda Isco marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha bisha Janaayo ee horraanta sanadka cusub.
Real Madrid ayaa la soo warinayaa inaysan doonayn inay iska iibiso ciyaaryahankeeda Isco inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo, inkastoo ciyaaryahanku uu hal ugu jiray inuu tago xilli ciyaareedkan.
27-sano jirkaan ayaa kaliya lix kulan u saftay horyaalka La Liga kooxda Los Blancos intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkan 2019-20, halka uu kaliya hal kulan ka soo muuqday afartoodii kulan ee ay dheeleen Champions League.
Sidaasi awgeed waxaa la soo jeediyey in Real Madrid ay eegeyso inay iibiso ciyaaryahanka reer Spain bilowga sanadka 2020, laakiin sida ay warinayso Jariiradda Marca, taasi ma dhici doonto suuqa kala iibsiga xiddigaha ee soo aaddan.
Dhaawac muruqa ah ayaa weeraryahankan seejiyey lix kulan horraantii xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo shaxdii ugu horreysay ee Zinedine Zidane markii uu ku soo laabtay taam ahaanshihiisa.
Isku soo wada duuboo, kubbadsameeyahan, kaasoo sidoo kale lumiyay booskiisii xulka qaranka Spain ayaa dhaliyay 48 gool 284 kulan oo uu u saftay Real Madrid tan iyo markii uu kaga yimid Kooxda Malaga.
Dhinaca kale da’yarkii hore ee kooxda Valencia ayaa heshiiskiisa haatan ee garoonka Bernabeu waxa uu ku eg yahay illaa xagaaga 2022-ka.